बरु पार्टी डुबोस् तर क्षेत्री बाहुन को ठाउँ मा न आइपुगोस्
बरु पार्टी डुबोस् तर क्षेत्री बाहुन को ठाउँ मा न आइपुगोस्। त्यही होइन सुशील ले गरेको?
उसको व्यवहार ले देखाएको कुरा।
बरु देश तहसनहस होस्, टुटोस, मारकाट होस, गृह युद्ध होस्, त्यो मंजुर, तर मधेसी/जनजाति/दलित/महिला को बराबरी नामंजूर ----- त्यही होइन attitude?
कानुन र संविधान नमानेको भन्दै सुशील र बामे दुबै लाई क्रांतिकारी बाई बाई गर्ने बेला आयो।
bamdev gautam Constituent assembly constitution federalism madhesi janajati kranti 2015 Nepal Sushil Koirala